Xiaomi Mi 9 SE: Nkọwapụta, ọnụahịa na mbupute gọọmentị | Gam akporosis
Xiaomi na-egosi anyị ụdị Mi 9s zuru oke na mmemme a na China. Na mgbakwunye na ị gosipụtara Mi 9 ọhụrụ ya, ika na-ahapụ anyị na ngwaọrụ ndị ọzọ. Otu n'ime ha bụ Xiaomi Mi 9 SE a, na-esote na njedebe nke afọ gara aga. Ọ bụ ama na-eru elu adịchaghị n'etiti-nso. Yiri na imewe, mana ya na nwetakwu nkọwa.
Xiaomi Mi 9 SE bịakwara kamera azụ atọ na ihe mmetụta mkpịsị aka jikọtara ya na ihuenyo ya. Ọ bụ ezie na nkọwa ya n'ozuzu ya bụ ọkwa dị n'okpuru nke nke usoro gara aga. Ma nke a adịchaghị n'etiti-nso dị ka a-akpali nnọọ mmasị ama.
Ya mere, ọ na-oru na nke a ngalaba ahịa nke nwere nnukwu uto na 2018. Ọ na-ewepụta nkọwa dị mma n'ozuzu ya na atụmatụ ya na ihe anyị hụrụ na Mi 9. Ya mere, a na-ewepụta ya dị ka ezigbo nhọrọ maka ndị ọrụ nwere obere ego.
1 Nkọwapụta Xiaomi Mi 9 SE
2 Xiaomi Mi 9 SE: Xiaomi nzọ na ntanetị dị oke ala
Nkọwapụta Xiaomi Mi 9 SE
Nke a bụ ihe ijuanya Xiaomi Mi 9 SE site na ịbụ onye mbụ na ahịa iji Snapdragon 712 dị ka ihe nhazi ya. Kemgbe izu ole na ole gara aga, e gosipụtara ya. Ya mere, ụdị ndị China emeela ngwa ngwa na nke a. Nkọwapụta ekwentị zuru ezu:
Nka na ụzụ nkọwa Xiaomi Mi 9 SE
Nlereanya Mi 9 SE
Ihuenyo 5.97-anụ ọhịa Super AMOLED na mkpebi HD zuru oke + na nha 19: 9
Nhazi Qualcomm Snapdragon 712
Nchekwa n'ime 64 / 128 GB
Igwefoto na-aga n'ihu 48 + 8 + 13 MP nwere oghere f / 1.8 na f / 1.2 PDAF na LED Flash
Atụmatụ ndị ọzọ Mkpisiaka ihe mmetụta wuru na ihuenyo NFC ihu unlock kpọghee ekwt
Batrị 3.070 mAh na ngwa ngwa
Nke a Xiaomi Mi 9 SE biara na ihe yiri nke nwanne ya nwoke nke okenye. Ọ bụ ezie na na nke a ọ bụ nwetụrụ obere ihe nlereanya na usoro nke nha. A dịtụ obere ihuenyo, na mgbakwunye na-enwe a ala arọ karịa elu-ọgwụgwụ. Na nke a, anyị nwere ike ịhụ na ihuenyo ahụ dịkwa ọtụtụ nke ihu ekwentị ahụ. Na mgbakwunye inwe ọkwa n'ụdị ndapụ mmiri na ihuenyo.
Ejikọtakwara ihe mkpịsị aka mkpịsị aka n'ime ihuenyo. Ya mere, asịrị ahụ mezuru na akara ndị China zubere iwebata ya na ngosipụta n'etiti ya. N'ime ekwentị anyị na-ahụ ọdịiche. Ma nhazi ahụ na RAM na njikọta nchekwa dị iche. Mgbe nke a Xiaomi Mi 9 SE biara na 6 GB nke RAM. Ọzọkwa, na Snapdragon 712 a na-atụ anya ịrụ ọrụ nke ọma nke ekwentị.
Xiaomi Mi 9 SE: Xiaomi nzọ na ntanetị dị oke ala
Ngalaba foto bu ihe ika choro iji mesie ike na oke a. Dị ka nwanne ya nwoke nke okenye, nke a Xiaomi Mi 9 SE biara na igwefoto nwere okpukpu atọ. Kekọrịta igwefoto dị elu na igwefoto dị elu. Ebe ọ bụ na anyị nwere sensọ megapixel Sony IMX586 48 megapixel yana nke abụọ 8 megapixel sensor na nke atọ 13 megapixel sensor. Ya mere o kwere nkwa inye otutu ọysụ na mpaghara a.
Dị ka o kwesịrị ịdị, ọgụgụ isi na-eme ka ọ pụta ìhè na ngwaọrụ ahụ. Na nke a ka igwefoto dịkwuo mma ma nye anyị ụdịrị foto dị na ha. Mgbe Igwefoto n'ihu ekwentị na-abịa na otu ihe mmetụta 20 MP. N'ime ya anyị na-emeghekwa ihu.
Dịka ụdị nke ọzọ, Xiaomi Mi 9 SE abịa ugbu a na gam akporo achịcha, yana MIUI 10 dị ka akwa nhazi. N'ọnọdụ gị, batrị ahụ bụ ikike 3.070 mAh. Ọ nwekwara ngwa ngwa odori a ikpe. E kwubeghị aha ole ọ ga-ewe iji kwụọ ụgwọ ekwentị ahụ maka ya.
Dị ka ọ dị n'ihe banyere Mi 9, maka ugbu a Anyị nwere ọnụahịa nke Xiaomi Mi 9 SE a ga-enwe na China. Ma ọ dịkarịa ala, ha nwere ike ịbara anyị uru ma a bịa n'ịmatakwu banyere ngwaọrụ a gbasara ọnụahịa. Agbanyeghị na anyị nwere ike ị nweta ozi ndị ọzọ gbasara ọnụahịa ya wee malite na Europe na Sọnde na MWC 2019.
Anyị na-achọta ụdị abụọ nke ụdị a dị oke mkpa nke ika ahụ. Ha abụọ nwere 6 GB nke Ram, ọ bụ ezie na nchekwa ahụ dị iche dabere na ụdị ha. Ndị a bụ nsụgharị na ọnụahịa nke Xiaomi Mi 9 SE na China:
Ihe nlere anya nke 6/64 GB di na 1.999 yuan (euro 262 na mgbanwe)
Versiondị ekwentị ahụ nwere 6/128 GB na-abịa na ọnụahịa nke 2.299 yuan (ihe dị ka euro 302 ịgbanwe)
Agbanyeghị na Sọnde anyị ga-ahapụ obi abụọ banyere ọnụahịa ha na Europe. Mana dị ka ọ na-adị, anyị nwere ike ịtụ anya nke ahụ ọnụahịa ga-adị elu nye ndị ga-agbanwe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Xiaomi » Xiaomi Mi 9 SE: Uzo ohuru ohuru ohuru
Otu esi agbaso ihe ngosi nke Galaxy S10 na Galaxy Fold